Best launchers gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ndị kacha mma launchers maka gam akporo
Imirikiti ndị ọrụ nke gam akporo ngwaọrụ na-eji launcher.. Ọ bụ ezie na ọtụtụ n’ime anyị amaraworị ihe nke a bụ, maka ndị na-amatabeghị, anyị ga-agwa ha na onye na-ebupụta ma ọ bụ sụgharịa ya n’asụsụ Spanish, onye na-ebubata ihe, na-ahụ maka ịmalite ngwa nke ngwaọrụ anyị yana na mgbakwunye na ịnye ihe dị iche imewe na nke ahụ anyị nwere ike ịchọta site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na smartphone ma ọ bụ mbadamba.
Enwere ike iche ọtụtụ ihe site na onye ọzọ site n'ọtụtụ ihe, n'etiti nke anyị nwere ike ịkọwapụta atụmatụ izugbe nke desktọọpụ, imepụta akara ngosi ma ọ bụ ọnọdụ ha, ọnụọgụ ihuenyo ha kwere ka anyị nwee, omume nke wijetị ma ọ bụ nhazi nke drawer.
Officiallọ ahịa ngwa ngwa gọọmentị ma ọ bụ otu ihe ahụ Google Play jupụtara na ndị na-agbapụta dị iche iche, nke na-enye anyị nhọrọ dị iche iche, atụmatụ na ọrụ onye obula, ma anyi ekpebie idebe 7 kacha mma n’uche anyị na anyị ga-enye gị taa n’isiokwu a na-adọrọ mmasị.
Ọ bụrụ na ị nwere ngwaọrụ gam akporo, dị njikere ugbu a ịmara 7 launchers kacha mma dị maka ibudata ugbu a site na Google Play.
2 Nchịkọta Google ugbu a
3 Onye nrụpụta ihe ọkụkụ
5 3 Na-eme Ncha Na-eme Ncha
6 Ihe mbido ihe 3
7 Gaa Launcher Ex
Nova Launcher bụ ikekwe onye kacha mara amara nke ndị niile dị n'ahịa ma bụrụkwa otu n'ime ibudatara. Njirimara ya bụ nnukwu okike ọ na-enye anyị, ezigbo gam akporo ọ na-enye anyị yana onye na-ebido ihe anaghị eri ọtụtụ akụrụngwa, ọ pụtaghịkwa ị doesụ oke batrị.
Ekele maka onye na-ebupụta ihe a, anyị ga-enwe ike ịgbanwe nha na ụdị akara ngosi ahụ, ka ọ fọrọ nke nta ka ọ gbanwee ọdịdị nke ọdụ ụgbọ mmiri na site na ohere nke ịgbakwunye ma ọ bụ wepu ogwe ọchụchọ. O nwekwara ọtụtụ mmelite site n'oge ruo n'oge, nke mere ka ọ dịrị, dịka ọmụmaatụ, imeghari ngwa ngwa na gam akporo Lollipop 5.0 ọhụrụ ya na imepụta ihe ya.
Nova Launcher Enwere ike ibudata ya na ụdị abụọ dị iche iche, otu na-akwụ ụgwọ kpamkpam na nke ọzọ akwụ ụgwọ, nke ga-enye anyị ọtụtụ ohere na nhọrọ. Maka ọnụahịa na euro na anyị ga-akwụ ụgwọ maka ụdị a kwụrụ ụgwọ, o doro anya na ọ bara ezigbo uru ịzụrụ.
Developer: Ngwanrọ nke TeslaCoil
Nchịkọta Google ugbu a
Ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ kachasị mkpa n'ụwa nke teknụzụ amalitela onye na-ebupụta gam akporo na Google n'ezie enweghị ike ịbụ onye ọzọ. Site na mwepụta nke gam akporo gam akporo KitKat, onye ọrụ ọchụchọ ahụ malitere onye na-ebupụta ihe niile Nexus ngwaọrụ na-eyi na ndị ọrụ niile na-enwekarị mmasị.
Nke a launcher pụtara ìhè maka ịnye anyị ezigbo gam akporo na imewe, nke, dị ka anyị kwuru na mbụ, yiri nke ngwaọrụ Google rụpụtara., nke ahụ bụ ikwu ndị ezinụlọ Nexus.
Mụ onwe m kemgbe a onye ọrụ nke a launcher maka a ogologo oge na ọ bụrụ na m ga-egosipụta ihe ọ ga-abụ ịdị ọcha ya, na mgbakwunye na enwere ike iji ya mee ihe kpọmkwem. N'ezie, dị ka ndị na-agbapụ mmiri niile, ọ nwere isi ihe na-adịghị mma, n'etiti nke anyị ga-egosi obere nhazi ọ na-enye ohere yana na anyị ga-edo onwe anyị n'okpuru ọchịchị aka ike nke Google.
Onye nrụpụta ihe ọkụkụ
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ na onye na-ebupụta mmiri bụ naanị -enwe ike n'ụzọ zuru ezu hazie gị gam akporo ngwaọrụ ka amasị gị Theater malite ma na-enweghị obi abụọ ọ bụla ị họọrọ.
Ma ọ bụ na ịmalite a ga-enye anyị ohere ọ bụghị naanị iji hazie ọnụ anyị ruo na nke kachasị, kamakwa iji mepụta isiokwu nke anyị, na mgbakwunye na ịnweta nnukwu nchịkọta ha, kpamkpam n'efu.
Ọ bụrụ n'ịchọta ihe masịrị gị n'etiti gburugburu ebe nrụọrụ n'efu, ịnwere ike budata ya ma gbanwee ya dịka ọ masịrị gị iji mezue gị nke ọma, nke bụ ịrụ ụka adịghị otu uru dị ukwuu nke a launcher. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ezughi, ngwa a na-amụta nke nta nke nta yana oge nke ihe ị na-eme, ọ ga-etinye ngwa ahụ n'usoro dịka oge ojiji.
Enwere ike ibudata Them Theater n'efu na Google site na njikọ ị ga-ahụ n'okpuru.
Themer: Ihe ngebichi, HD Akwụkwọ ahụaja
Yahoo Aviate abụwo otu n'ime ndị launchers nke welitere atụmanya kachasị elu n'oge na-adịbeghị anya mgbe ọ rutere n'ahịa. Ma ọ bụ na ọbụlagodi na oge nyocha ọ nwere ọtụtụ puku ndị ọrụ si n'akụkụ ụwa niile, ndị toro nnukwu ọrụ ya na nhọrọ ya na-atọ ụtọ.
Ugbu a na ụdị nke ikpeazụ dị na ahịa Nke a Yahoo launcher na-aga n'ihu na-emeri ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ ekele maka ịdị mfe nke mmemme gam akporo gam akporo mgbe ụfọdụ.
Nke a launcher nwere nnukwu ọrụ kọmputa nke ngwa anyị site na otu, yana n'ime nke ọ bụla, ọ na-egosi ngwa kachasị eji ka ihe niile dịrị mfe.
Na mgbakwunye, ọ na-ahakwa kọntaktị ekwentị anyị dabere na ugboro ole anyị na-agwa onye ọ bụla.
Chọọ Yahoo Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ngwa na-eme ka ndụ anyị dị mfe karị, mana nke ahụ na-etinye ihe niile n'usoro. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịtụ, ọ nwere ike bụrụ ọmalitere gị zuru oke, mana ọ bụrụ n’achọghị ka onye ọbụla tinye ihe gị n’usoro, pụọ ngwa ngwa maka sọftụwia a abụghị maka gị.
3 Na-eme Ncha Na-eme Ncha
Ọ bụrụ na nke gị bụ minimalist imewe gị ama ma ọ bụ mbadamba, oke nhọrọ nwere ike ịbụ nke a 3 Na-eme Ncha Na-eme Ncha. Ma ọ bụ na iji ihe dị mfe, dị iche iche yana nke ahụ na-erikwa obere akụ, ọ na-eme onye ọ bụla nke gbalịrị ya na nke mbụ ya hụrụ ya n'anya. Ihe omuma ya bu ihe anyi nwere ike ikwu na amara ya dika ifuru nke anyi nwere ike inweta ngwa obula.
Na mgbakwunye, n'ezie, ọ na-enye anyị ọrụ na nhọrọ ndị na-atọ ụtọ dị ka mmalite mmalite ngwa ngwa dị na desktọọpụ, drawer ngwa nke ahaziri site na edemede ma ọ bụ ohere nke ịtụkwasị akwụkwọ ahụaja animated, nke anyị niile na-ahụ n'anya, ọbụlagodi na ha na-eri otu nnukwu batrị.
Nkwado anyị bụ na ọ bụrụ na ịnwalebeghị Smart Launcher 3 na ngwaọrụ gị, gbalịa ugbu a, n'ihi na ọ bụ ezie na ọ dịghị ama nke ndị ọzọ launchers, ọ bụ a karịa ihe na-akpali nhọrọ. Dị ka ọtụtụ ndị na-agbapụ na ahịa, enwere ike ibudata ya na Google Play n'efu. E nwekwara nsụgharị ọzọ a na-akwụ ụgwọ nke na-enye anyị ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke nhọrọ nke ụdị dị iche iche.
6 Na-eme Ncha Na-eme Ncha
Developer: Otu egbe nyocha
Ihe mbido ihe 3
Este Ihe mbido ihe 3 bụ otu n'ime ọtụtụ ndị na-agbapụta nke dị na nke a na-akpọ njiri mara ihe eji eji gam akporo Lollipop 5.0. Agbanyeghị, nhọrọ ma ọ bụ kama ịrụ ọrụ nke kacha pụta ihe na adọta uche n’etiti ndị ọrụ bụ ihe a na-akpọ Quickdrawer, ekele nke, site na ịmịpụ mpụta site n'aka ekpe nke desktọọpụ, ngwa kọmputa anyị niile ga-apụta n'usoro abidi.
Nhọrọ a na-amasị ọtụtụ ndị ọrụ ebe ọ na-enye ohere ịnweta ngwa ọ bụla ngwa ngwa na enweghị ọtụtụ nsogbu. A na-akpọ ọrụ ọzọ na-adọrọ mmasị Quicktheme nke ga-enyere anyị aka ịhazi ihe niile eji agba agba siri ike nke ukwuu n'ụdị ihe eji emepụta ihe.
Action obubata bụ a obubata nwere ike ibudata n'efu na Google Play Ma ọ bụrụ na ịnwalebeghị ya, ị gaghị eche ka ịnwale ya ọzọ.
Onye nnocha ihe
Developer: Onye nnocha ihe
Gaa Launcher Ex
Nke a launcher, baptizim dị ka Gaa Launcher Ex na nke ahụ maka ọtụtụ ndị ọrụ nke ngwaọrụ nwere sistemụ arụmọrụ nke gam akporo bụ doro anya ihe nnabata kacha mma dị ekele nnukwu nhọrọ na ọrụ nke ụdị dị iche iche ọ na-enye anyị.
Otu n'ime ebe nlegharị anya ya bụ ohere ị nwere ike ịhazi nke ọ na-enye, nke na-adọrọ mmasị ọtụtụ ndị ọrụ.
Otu nnukwu nsogbu ya bụ na ọ na-eri ọtụtụ akụ sitere na ọdụ anyị, nke a na-ahụkarị na etiti ma ọ bụ ngwaọrụ dị ala. Na mgbakwunye, iji nwee ahụmịhe zuru oke, anyị ga-azụta ụdị Pro, nke anyị ga-akwụ ụgwọ naanị ihe karịrị 4 euro.
Gaa Mgbapu EX: Okwu na Ndabere
Developer: GOMO Ndụ
Kedu ka anyị si ekwu n'ụdị ndepụta ndị a, anyị ahọrọla naanị ndị na-agba ọsọ 7, mana anyị nwere ike ịdepụta ndepụta nke 30 yana enwere ike ị ga-efu ihe ọ bụla, dabere na onye. N'ihi nke a, ọ bụrụ na ị chere na anyị ahapụla onye na-ebupụta ihe maka na ị bụ n'etiti ndị 7 kachasị mma na ndị dị na Google Play, anyị ga-achọ ka ị gwa anyị, ọ bụghị naanị ka anyị wee mata ma nwaa ya, mana ya na onye ọ bụla gụrụ isiokwu a nwekwara ike ịnụ ụtọ ya. Nwere ike iji oghere edebere maka nkọwa banyere ntinye a ma ọ bụ otu n'ime netwọkụ mmekọrịta anyị nọ na ya iji mee ka anyị mara, ma kwuokwa maka ndị ọka iwu anyị tụpụtara gị taa.
Anyị chọrọ ịhapụ gị otu ajụjụ; You bụ onye ọrụ nke onye na-ebupụta ebumnuche nke onwe gị na-ebudata ma ọ bụ kama ị na-ahọrọ iji nke na-abịa na ala na smartphones ma ọ bụ mbadamba?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ndị kacha mma launchers maka gam akporo
Adolfo Barbosa dijo
Agbaghara Hello igba egbe, ọ bụ ihe kasị mma okwukwe niile, anya n'ihi na ya na ngwa play google
Zaghachi Adolfo Barbosa
Edgar: D dijo
Maka m nke kachasị mma bụ 360 n'ihi na enwere ike ịhazi ya site na ịgbanwe mkpụrụedemede, mgbanwe mgbe ịmepe ngwa, ọ nwekwara ọtụtụ isiokwu ma yie onye na-ebuputa "MIUI" ma ọ naghị eri ọtụtụ ihe.
Zaghachi Edgar: D.
Ndị Kily dijo
Ọ ga-adị mkpa ma bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma ọ bụrụ na data niile sitere na ndị na-agbapụ mmiri a na-esonyere iji ebule kọmputa, ebe ọ bụ na n'ọtụtụ ọnọdụ, ngwa ndị a dị oke arọ ma nwee ike "belata" kọmputa ahụ. ihe atụ ndị ọzọ nke ndị a, obere oriri nke akụ, ezigbo ngwa na ọdịdị bụ apus, nke nwere ọtụtụ obere oriri na ngwa a na-emezi.
Zaghachi ndị Kily
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ihe ọhụrụ OnePlus 2, onye na-egbu egbu
Etu ị ga - esi gbanye Flash na Google Chrome